Sileli ngengoma isixeko seengcwele mhla kwafika iZolani Youth Choir – Ntu News
October 11, 2021 October 11, 2021 Jasmin Rose	2 Comments	RUCC, ZYC
Ibhalwe nguAsakhe Cuntsulana : 09 kweyeDwarha 2021
Ifoto ithwetyulwa nguBiancaStucky
Ngomhla woku-1 kweyeDwarha 2021 uMzantsi Afrika ubuyele kwisigaba sokuqala ukulwa ubhubhane weCorona. Yile nyanga kanye iZolani Youth Choir (ZYC) ibinokhonketho lwayo lonyaka kweli phondo leMpuma Koloni. Iqale yagqogqa iziphaluka nemimango idyusha neNelson Mandela Chamber Choir ebhexeshwa nguAkhona Nkumanda eGqeberha ekuqaleni kwale veki. Isibhengezo sotyelelo lwale kwayala kweseNgcwele kubangele iqabaka yobusuku bangolwesihlanu ibeyimbawula kwiCathedral of St Michael and St Georges. IZYC ibihlangane neRhodes University Chamber Choir (RUCC) ikunye neMakhanda KWANTU Choir ngorhatya langolwesihlanu kumhla wesi-08 kweyeDwarha 2021. Kuvule ibhongo neqhayiya ledolophu yaseMakhanda abaxhasi nabathandi bomculo weekwayala bephume ngobuninzi babo.
IRUCC idibene neKWANTU Choir zivule lo msitho osihloko sithi ‘A Night of Song and Dance’ (Ubusuku Bengoma Nomxhentso) ngengoma ezine baqala ngethi “Let my Love be heard” (Vumela uthando lwam luviwe), evuselele umnyele ikwathuthuzela iintsapho eziphulukene nezihlobo ngenxa yalo bhubhane oyiKhorona. Umbhexeshi kwayala uKutlwano Kepadisa ugqabaze ngesihloko sale ngoma ekwakhankanya ukuba uThixo woxolo nothando wanga angazithuthuzela iintsapho, iingelosi zibafunqule zibaphe iimpiko, abalanduleleyo bamnkelwe emazulwini. IZYC ebhexeshwa nguOdwa Mvunge iphume eMpuma Kapa eAshton sema ngeenyawo isixeko seengcwele kusabelwana ngomculu, ingoma nesingqi sakwaNtu. Kubemdaka iisali isothatha iqonga lekwayala besitsho ngentlokomo enkulu ngengoma ethi ‘Molweni Siphethe Umculo’. Ibiyimiyiyizelo, amakhwelo nemihlali kubabukeli ngenxa yemincili noncuthu lwengoma ngoba busuku.
Enye yeengoma ebhalwe nguSivuyile Scott Msizi ethi “Thethela Bawo” iculwa yiZYC ivuselele umnyele ikhalimela umbulala zwe weCOVID-19, ukubulawa kwamanina nabantwana ikwadomboza kuMelingqangi ukuba angenelele siphile isizwe. UOdwa Mvunge uphose amazwi ombulelo ngelithi ‘kumnandi ukwamnkelwa ngezandla ezishushu liRhini, ubukho babantu ukuzoxhasa umculo wolutsha kuyasithundeza siqhubekeke, enkosi kakhulu’. IRUCC, KWANTU Choir neZolani Youth Choir zivale lo msitho ngengoma ethi “Sihamba noJesu” yama ngeenyawo indlu iyonke kusombelwa, kuqhwatywa, iyimiyiyizelo salala ngengoma isixeko seengcwele.
← Flash Ikumkani puts the Xhosa rap on the map
COVID-19 regulations amended to allow spectators into sport venues →
May 3, 2021 Jaco Gangat-Duvenage	0
2 thoughts on “Sileli ngengoma isixeko seengcwele mhla kwafika iZolani Youth Choir”
Huntsu sizwe sika Xhosa. Mahle yaye awagxojwa masibulele ngokuthi usibhalele, yaye usizobele umfanekeliso weliso ngoku kwenzeka. Enkosi
Uyibeke yacaca bhuti. Enkosi ngokusibeka apho bekukho ukutya komphefumlo. Ngathi ndiyazibona ezo kwayala zisabelana ngeqonga, incamisa engako yona. Mhlawumbi xa uphinda ugxelesha apha embhalweni uya kuqaphela iziphene nje ezimbalwa. Ndiza kubalula nje zibe ntathu. Uthe ‘ibinokhonketho’ endaweni ka-ibinokhenketho, wathi ‘lekwayala’ endaweni ka-le kwayala, waza wathi ‘kuMelingqangi’ endaweni ka-kuMvelingqangi. Ungawaqwalasela loo matye usaqingqa njalo. Enkosi kakhulu.